Tababareyaasha Kooxaha Premier League Oo Laga Mamnuucay Inay Ka Hadlaan Arrintan - Gool24.Net
Tababareyaasha Kooxaha Premier League Oo Laga Mamnuucay Inay Ka Hadlaan Arrintan
Tababareyaasha kooxaha Premier League ayaa helay hanjabaad ay ku mutaysan doonaan ciqaab haddii ay ka hadlaan arrinta muranku ka taagan yahay ee ah in ciyaaraha lagu daawado lacag oo qof kasta oo gurigiisa jooga uu bixiyo $20 doolar si uu u daawado kulamada qaarkood.
Premier League ayaa keenay qorshe cusub oo ay lacag ku samaynayaan kaddib markii ay dhaqaale xumo ba’ani kasoo gaadhay garoomada taageereyaal la’aanta ah, waxaana lasoo rogay kulamada ka bilaabmaya Sabtida soo socota ay dadka guryahooda ka daawanaya bixiyaan lacag dhan £14.95 Gini si ay telefishanka uga daawan karaan ciyaarta.
Jamaahiirta ayaa ku qasbanaan doona inay lacag la baxaan kulanada qaarkood iyadoo lagu daahfurayo ciyaarta Chelsea iyo Southampton ee Sabtida soo socota iyo sidoo kale kulanka Manchester United ay booqon doonta Newcastle United maalinta Axadda.
Arrintan oo taageereyaashu ay u arkaan culays kusoo kordhaya ayaa loo diiday tababareyaashu inay soo farogeliyaan oo ay dareenkooda ka yidhaahdaan, waxaana lagu qasbay in ay afka ka xidhaan oo aanay ereyo lid ku ah ka odhanin marka laga reebo inay soo dhoweyn karaan.
Sida uu qoray wargeyska Daily Mail, Premier League ayaa ku wargeliyey dhamaan tababareyaasha 20ka kooxood ee horyaalka Premier League in aanay wax su’aal ah ka keenin arrintan, taas oo ay uga jeedaan in aanay ku kicinin taageereyaasha.
Tababareyaasha waxa kale oo loo sheegay in halkii ay wax ka sheegi lahaayeen arrintan ay kaliya ka hadli karaan oo ay dalban karaan in jamaahiirta loo ogolaado inay dib ugu soo laabtaan garoomada.